Dr. Tint Swe's Writings: Ketamine စိတ်ကျလူနာအားတက်စရာသတင်း
ကက်တမင်း ဆေးကိုစိတ်ဓါတ်ကျနေသူတွေကိုပေးတာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် သက်သာစေတာတွေ့ရတယ်လို့ ကနေထွက် ဘီဘီစီသတင်းမှာပါလာတယ်။
ကက်တမင်း ဆေးဟာမေ့ဆေးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ညစ်ညမ်းဆေးအနေနဲ့လဲသုံးကြသေးတယ်။ သတိထားစရာ ညစ်ညမ်းဆေးတွေအကြောင်း အနည်းဆုံး ၃ ပုဒ်ရေးတင်ထားပါတယ်။ ဘလော့ခ်မှာသာ တင်ခဲ့ရာကနေ မေးတာတွေများလာလို့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာပါတင်ခဲ့တယ်။
1. Dirty drugs ညစ်ညမ်းဆေးဝါးများ
2. Dirty Medicines ညစ်ညမ်းဆေးတွေ
3. Date Rape Drugs သတိလစ်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆေးဝါးများ
Dirty drugs ညစ်ညမ်းဆေးဝါးများကိုပြန်လှန်တော့ Share 2787 ယောက် ရှိနေတာတွေ့ရတယ်။ စေတနာနဲ့ ထပ်ဆင့်သတိပေး၊ အသိပေးမှတ်ချက်တွေလဲမနည်းပါ။ ဒီအထဲမှာဆေးကြော်ညာတာလားလို့ အမေးခံရသေးတယ်။
(ကက်တမင်း) ဆေးကိုစိတ်ဓါတ်ကျနေသူတွေကိုပေးပြီးကုသတဲ့အခါ တချို့လူနာတွေမှာ နာရီပိုင်းအတွင်း သက်သာလာတာတွေ့ရလို့ သဆင်းခေါင်းစဉ်မှာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် သက်သာစေတာတွေ့ရတယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
စမ်းသပ်မှုကတော့ သေးပါတယ်။ လူနာ ၂၈ ယောက်သာရှိသေးတယ်။လူ ၁ဝ ယောက်မှာ ၁ ယောက် တသက်မှာ အနည်းဆုံး ၁ ခါ၊ စိတ်ဓါတ်ကျတာခံစားနေကြပါတယ်။
Prozac လိုမျိုး Antidepressants စိတ်မကျဆေးသုံးတယ်။ Behavioural therapies အမူအယာကုသနည်းသုံးရပါတယ်။ စိတ်ဝေနာသည်တွေအတွက် စိတ်မကောင်းစရာကတော့ လူနာအတော်များများကုသနည်းမတိုးကြပါ။
Oxford Health NHS Foundation Trust ကနေ အဲလိုလူနာတွေကို Ketamine ဆေးကိုမိနစ် ၄ဝ ကြာ၊ ၆ ခါအထိ သွင်းပေးတယ်။ တချို့က ၆ နာရီနေတာနဲ့ ဆေးစွမ်းပြတယ်။ ၈ ယောက်ကတိုးတက်မှုပြတယ်။ ၄ ယောက်က ပျောက်သွားတဲ့အထိ ကောင်းလာကြတယ်။
စိတ်ကျလူနာတွေကို အနှစ်၂ဝ ကြာကုသပေးနေတဲ့ သုတေသနခေါင်းဆောင်ဆရာဝန်ကဆေးရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ သတိထားရမှာမို့ အိမ်မှာတင်ဆေးကုတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောတယ်။ Prozac ဆေးကိုလဲလက်မလွတ်ဘို့ သတိပေးပါသေးတယ်။